Otrikafo: “Afa-manao diplaomasia ny parlemanta” | NewsMada
“Tokony hanao diplaomasia koa ny parlemantera ary afa-mandeha irery amin’izany, indrindra amin’ny fampiraisana ny vahoaka ato anatiny satria mahasolo tena ny vahoaka” hoy ny sekretera jeneralin’ny Otrikafo, Rabe­va­hiny Elia. Nanatitra taratasy momba izany teny amin’ny lapan’i Tsimbazaza izy ireo saingy niveri-maina fa tsy teo ny filohan’ny Antenimiera, tamin’ity herinandro ity.
Manantena fandraisana an­draikitra amin’io andrimpanjakana io ry zareo. Ma­nana ny maro anisa ny fitondrana amin’ny mpikambana eo anivon’ny Antenimiera. Koa anisan’ny fitaovana iray eo an-tanan’ny fanjakana mba hanampy azy amin’ny fitakiana io andrimpanjakana io.
Tokony hamoaka lalàna ny Antenimierampirenena
“Samy mahafantatra ny ataon’ny Frantsay isika amin’ny fomba ilazana fa tsy azo averina amin’i Madagasikara ireo Nosy malagasy manodidina”, hoy izy. Mbola nohamafisin’ny tatitry ny An­te­ni­mi­erandoholona frantsay iza­ny farany teo. Tsy mbola misy fandraisana andraikitra na valy bontana avy amin’ny fanjakana malagasy.
Samy nahatsiaro ny rehetra fa tamin’ny fivorian’ny Antenimierampirenena teny amin’ny CCI, Ivato, nisy ny kabarin’ny filohan’io andrimpanjakana io hoe : azon’ny Antenimierampirenena atao tsara ny mamoaka lalàna fa an’i Madagasikara ireo Nosy malagasy manodidina ireo. Raha mbola manda ny tsy hamerina ireo Nosy malagasy manodidina ireo ny fitondrana frantsay, tsy misy antony intsony manakana ny Anteni­mi­e­ram­pirenena malagasy tsy hamoaka izay lalàna izay fa an’i Madagasikara ireo Nosy ireo.